Kulanka Cimilada aduunka oo ka furmay Doha - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Doha Climate Change Conference- kulanka cimilada ee Doha. Sawirle: AP Photo/Osama Faisal, File/Scanpix
Kulanka Cimilada aduunka oo ka furmay Doha
La daabacay måndag 26 november 2012 kl 10.13
Maanta waxaa magaalada Doha dalka Qatar ku kulmaya wadoxaajoodyaasha cimilada ee ka socda wadamada adoonka oo dhan si ay ugu qayb-galaan kulanka sannadlaha ah ee cimilada ay soo qanban-qaabiso Qaramada midoobey. Waxa ugu muhiimsan ee kulankaan looga hadlayo ayaa ah sidii meshiisa looga sii wadi lahaa heshiiska Kyotoprotokolka ee xadeeya ku siideynta wasaqda hawada. Sidoo kale waxaa kulankaan looga hadli doona sidii loo hirgelin lahaa heshiis cusub oo hirgala sannadka 2015.
Anna Lindsted oo ah safiirka Iswedhen ee cimilada ayaa ku sugan Doha. Mar ay u warameysay barnamijka ka baxa Sverigesradio p1-morgon ayey sheegtay in ay aad muhiim u leedahay in meshiisa laga sii wado heshiiska Kyotoprotolka uuna heshiiskas yahay midka kaliya ee maanta jira ee shaqeynaya. Sidoo kalena yahay mid la sii isticmaali karo inta heshiis kale laga hirgelinayo. Waxay Anna Lindsted intaas ku dartay in heshiiskan yahay mid ka dhex abuurayo is aaminaad wadama hor-u-marey iyo kuwo soo kobcaya.
Heshiiska cusub ee la rabo in la hergeliyo 2015 maxuu kaga dowanaanayaa heshiiska Kyotoprotolka?
Heshiiska Kyotoprotolka waxaa uu kala qaybinaya aduunka wadamada hor-u-marey iyo kuwo soo koraya. Wadamada hor-u-marey weeyaan kuwo heshiskan qasab kaga dhigayo in ay yareeyaan qashinka ay hawada ku siidaayaan halka heshiiska cusub sharuucdiisa ay qanabeyso wadamada oo dhan, inkastoo aysan taas ka micno aheyn wadama oo dhan in laga doonayo in ay isku wax qabtaan ,ayey tiri.